Wasaaradda Ganacsiga Somaliland oo Jartay Kharashka Diiwaangelinta Liisamada Ganacsiga 50% | Gabiley News Online
Wasaaradda Ganacsiga Somaliland oo Jartay Kharashka Diiwaangelinta Liisamada Ganacsiga 50%
Wasaaradda Ganacsiga, Warshadaha iyo Dalxiiska Somaliland ayaa waxaa ay jartay kharashka Diwaangelinta Liisamada.
Sida lagu sheegay awaamiir ay soo saartay Wasaaradda Ganacsiga, Warshadaha, iyo Dalxiiska Somaliland, kharashka diiwaangelinta meheradda ee muwaaddiniinta iyo ajaanibta ahba waxa laga jarayaa 50%.
Amarkan ayaa intaa ku daraya in qiimo dhimista lagu sameeyay diiwaangelinta ganacsiyada ka jira Somaliland ay sabab u tahay saameynta dhaqaale ee cudurka faafa ee COVID-19.
In kasta oo qiimo dhimista diiwaangelinta ganacsi ee Somaliland ay tahay mid lagu soo dhoweynaya dhiirrigelinta mashruuc ganacsi oo cusub, hannaanka laftiisu waa mid u baahan kara la macaamilidda hay’addo badan oo dawladeed sida Rugta Ganacsiga, Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud, Wasaaradda Maaliyadda iyo suurtagalnimada kuwa kale.
Amarka Wasiirka Ganacsiga, Warshadaha iyo Dalxiiska Somaliland Mudane. Maxamuud Xassan Sacad (Saajin) wuxuu si maldahan u sheegayaa nidaamka diiwaangelinta meheradaha iyo rukhsad bixinta hal-ku-yaal ah laakiin faahfaahin kama bixin goorta iyo sida ay u toosinayso nidaamka diiwaangelinta meheradaha cusub ee Somaliland.
Dhawr jeer, dawladda Somaliland, oo kaashanaysa Iskaashiga Caalamiga ah ee Iskaashiga Maaliyadeed (IFC) ee World Bank Group – One Stop Shop (OSS) Mashruuca oo ay ahayd inuu taageero ka geysto bixinta adeegga dawladda Somaliland iyo dhexdhexaadinta hawlaha diiwaangelinta ganacsiyada si looga fogaado waxa wax ka qabashada leh xafiisyo kala duwan.
Bishii February 2018, IFC waxay qandaraas siisay WYG shirkad la-talin si ay u horumariso diiwaangelinta meheradda ee internetka iyo nidaamka ruqsad siinta ee Wasaaradda Ganacsiga, Warshadaha, iyo Dalxiiska.
Si kastaba ha noqotee, mashruuca laguma guuleysan waxaana IFC la sheegay inay joojisay adeegii la-talinta ee WYG ee gaadhsiinta iyo ujeedooyinka fulinta.
Sida laga soo xigtay ilo wareedyo, iskudayadii hore gebi ahaanba ayaa fashilmay sababo la xidhiidha kala duwanaanta hirgelinta mashruuca oo u dhexeeya Wasaaradda Ganacsiga, Warshadaha, iyo Dalxiiska iyo Iskaashiga Maaliyadda Caalamiga ah.
Ilo wareedyadu waxay intaa ku dareen in Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga, Warshadaha iyo Dalxiiska, Mudane. Saajin waxay lumisay dulqaadkii ay ka laheyd Iskaashiga Maaliyadeed ee Caalamiga ah ee loogu talagalay horumarinta barxadda iyo dukaamaynta dijitaalka ah ee adeegyada diiwaangelinta ganacsiga taas oo caqabad ku ah xidhiidhka IFC iyo MoCIT.
Waxaa xusid mudan in IFC ay xayeysiisay codsi muujinaya hirgelinta diiwaangelinta ganacsiga iyo nidaamka shatiga ee bisha Juun 2020.
Hoos ka akhriso awaamiirta Wasaarada Ganacsiga